Ka tanasulida Jiritanka "Somalia"
27 May 27, 2010 - 9:25:21 AM
Xalka loo tartamayo: Ka tanasulidda Jiritaanka “Soomaliya”
Waxaan horey uga hadlay badigoobka Nabadda iyo Dhismaha Dowlad Soomaliyed.1 Sidaas oo kale, Prof Michael Weinstein oo wax ka dhiga Jaamacadda Mareykanka-Purdue University, si joogto ahna u falanqeya Arrimaha Soomaliya ayaa qoray labo maqaal oo muhiim ah.2 Prof. Michael Weinstein wuxuu soo jeediyay abaabulka “Dhaqdhaqaaq Labaad ee Gobannimadoonka Soomaliya” si loo badbaadiyo Qaranka Soomaliyeed. Hase yeeshe, ifaafalaha muuqda wuxuu yahay in xalka dhibaatada Soomaliya ee loo tartamayo yahay ka tanasulidda jiritaanka iyo sheegashada magaca, diinta, dowladnimada iyo dalka Soomaliya.
Soomaliya oo la’ jiheeye “Leadership” u dhigma kii Ciidammada Ruushka kala hareen dhallinyaradii Soomaliyeed kaddibna ku layday Badweynta, waxay baylaha u noqotay xukuumado keli talisyaal ah iyo Maafiyo caalami ah. Soomalida iska laheyd dalka waxay u qaybsantay kuwo isku qanciyay in qabilkooda noqon karo Qaran cusub; kuwo sheegtay inay ka mid yihiin Islaamiyiin caalami ah oo aan la aqoon haybtooda, deegaankooda iyo hogaankooda, laguna tilmaamay xag jir; Soomali ka mid noqotay Isbaheysiga Caalamiga ah ee la dagaalanka Islaamiyiinta lagu tilmaamay xag jirka; Soomali ku takhasustay afminshaarnimo, dillaalnimo iyo burcadnimo; iyo Somali ku tabaaleysan dalka gudihiisa iyo xeryaha Qaxootiga oo talo iyo tabar beeshay. Waxaa caado noqotay in la dhalliilo colaada iyo nidaam la’aanta ka taagan Konfurta Soomaliya taaso ah xaqiiqo jirta, hase yeeshe waxaan la isweydiin natiijada itijaaha gooni u socodka iyo kala daneysiga ay doorteen mujtamacyada ku nool Bariga iyo Waqooyiga Soomaliya. Colaadihii iyo is-qoonsigii dhexmaray qabaa’iilada qaarkood waxay abuureen dareen ah inay adag tahay in Soomali heshiiso oo xal loo helo sababihii asaaska u ahaa burburka Soomaliya taaso waddada u xaareysa in laga tanasulo sheegashada magaca iyo dalka Soomaliya. Itijaahaas waxaa gacan siiyay kooxaha Islaamiyiinta aan la aqoon dadka iyo dalka ay matalaan iyo danaha ay u adeegayaan oo shaki weyn laga qabo.
Ka been-sheegidda xaaladda iyo dareenka dadka iyo dalka waxay marin habaabisay xalka Soomaliya. George Orwell wuxuu yiri: “qiima-dhaca hadalka ayaa sabab u ah qaska iyo jaahwareerka siyaasadda, waxaana wanaag ku imaan karaa ayadoo marka hore la hagaajiyo hadalka (Political chaos is connected with the decay of language… one can probably bring about some improvement by starting at the verbal end.)” Hadallada hadoofka waxaa ka mid ah: “wax walba waxay u socdaan sidii loogu tala galay”, “Waxaan rabnaa Federaal hase yeeshe waxaan sameysaneynaa calan, dastuur iyo dowlad gaar noo ah”, “DFS iyo Mucaaradku guulo ayey gaareen marka la xasuuqo dad masaakiin ah oo rayad ah”, “AMISOM ma xasuuqin Muwaadiniin Soomaliyeed,” “DFS waa Dowlad Beesha Caalamku ictiraafsan tahay”, “Ethiopia ma joogto ama kama taliso Soomaliya”, “Muslim Ajnabi ah waa Soomali, Muslim Soomali ah waa Gaal”, “Islaamiyiinta Al Shabab iyo Xisbul Islaam ayaa qabsanaya dalalka Geeska Afrika iyo Mareykanka”, “DFS ayaa mataleysa Soomaliya”, “waxaan dhowraya ama difaacaya ku dhaqanka Sharciga, diinta Islaamka iyo danta ummadda soomaliyeed- oo ah Awr kacsi, iidheh ama daneysi gaar ah.”
Dalabka taagero dhaqaale ee Mas’uulinta DFS ku celcelinayaan wuxuu muujinaya waayo aragnimo iyo xishood la’aan waayo sharciyada Dowladaha deeqda bixiya ayaa diidaya in Maaliyad la siiyo dowlad magac u yaal ah, isla markaana laheyn maamul rasmi ah (functional Public Administration) oo lala xisaabtami karo. Shacabka Soomaliyeed wuxuu u baahan yahay hogaan “Leadership” gaarsiiya dhismaha Xukun Dowladeed oo haysta kalsoonida Shacbiga “ Legitimate Authority”. Xalku wuxuu ku jira Dhaqdhaqaaq Shacbi oo hadafkiisu cad yahay. Dr. Maxamud M Culusow
mohamuduluso@gmail.com More Articles